News - Falanqaynta 19aad ee Beijing iyo Imtixaanka Warbixinta Tacliinta iyo Bandhigga
Dareeraha Huiyu wuxuu kaqeybgalay BCEIA2019 wuxuuna kaga qeyb gali doonaa BCEIA2021 magaalada Beijing. . Booqo huiyu's waab, 6A011 #, si aad wax uga barato saamiga waxqabadka sare ee shirkadda ee saaristeeda Peristaltic saar daaweynta biyaha, sheybaarka, cilmi baarista iyo codsiyada.
Intaas waxaa sii dheer, kaalay oo booqo qolkeena si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah. Waxaan ku siin doonnaa muuqaalka guud sida muunada Huiyu u shaqeyso oo aan kuu sharaxno sida loogu dabaqi karo codsiyada guud iyadoo la adeegsanayo dhaqamada ugu wanaagsan ee la soo saaray iyadoo lagu saleynayo khibrada Shirkadda.
Marka, u gudub kabo # 6A011 oo ku dheh huiyu!
KU SAABSAN BCEIA
Waxaa maalgaliyay CAIA (Ururka Shiinaha ee Falanqaynta Qalabka), Shirka Beijing iyo Bandhigga Falanqaynta Qalabka (BCEIA) waa mid si heer sare ah loo soo dhoweeyay laguna gorfeeyo qalabka iyo falanqaynta qalabka Shiinaha. Ka dib markii loo qabtay lana horumariyey in ka badan 30 sano, BCEIA waxay noqoneysaa mid caan ka ah adduunka oo dhan, iyada oo soo bandhigayaasha iyo kaqeybgalayaashu ay ka kala imaanayaan in ka badan 20 iyo 30 dal siday u kala horreeyaan, si ay uga qaybgalaan dhacdada weyn sanad walba. Tirada kaqeybgalayaasha ayaa si tartiib tartiib ah u kordhay iyadoo sanadkii 2017 tirada kaqeybgaleyaasha diiwaangashan ay kor udhaaftay 25,000, khabiirada diiwaangashan ee Shirka Tacliinta ayaa gaaray 3,400.
U adeegida sidii madal loogu talagalay muujinta tiknoolajiyad cusub, qalab cusub iyo qalab cusub, Bandhigga BCEIA wuxuu had iyo jeer soo jiitay xiisaha adduunka ee khubarada, aqoonyahannada iyo shaqaalaha sayniska iyo teknolojiyadda. Sanadihii la soo dhaafay, celcelis ahaan in ka badan 3,000 oo qalab iyo qalab cusub ah ayaa la soo bandhigay oo lagu soo bandhigay Carwo kasta oo la soo dhaafay. Bandhigyaashu waxay si shakhsi ah ula xiriiraan kaqeybgalayaasha fikradaha falanqaynta qalabka sare, alaabada iyo teknolojiyada iyo xalalka.
Shirka tacliinta waa qayb muhiim ah oo muhiim ah oo ka tirsan BCEIA, waxaana had iyo jeer loo heellan yahay kor u qaadista tignoolajiyada cilmiga sayniska. Shirka hadda wuxuu kakooban yahay muxaadaro guud, 10 kalfadhi oo is barbar socda, goleyaal iyo shirar isdaba joog ah iyo dhacdooyin. Shirka waxaa ku jira mowduucyo kala duwan oo ay ka mid yihiin doodo ku saabsan mabaadi'da cusub, qaababka iyo teknolojiyada.
Shirka aqoon-isweydaarsiga ayaa ah kulan si heer sare ah loogu soo ururiyey xirfadleyda aadka loogu ixtiraamo berrinka. Khubaro ka socota akadeemiyadaha iyo machadyada adduunka caan ka ah ayaa jeediyay khudbado ku saabsan mowduucyada aadka looga doodo ee ku saabsan falanqaynta.
Shirku wuxuu ku raaxeysanayaa sumcad wanaagsan wuxuuna door muhiim ah ka ciyaarayaa kobcinta isweydaarsiga caalamiga ah ee sayniska iyo farsamada iyo sidoo kale horumarinta sayniska falanqaynta iyo farsamooyinka wax soo saarka qalabka ee Shiinaha.
"Sayniska falanqaynta wuxuu abuuraa mustaqbal", nagula soo biir shirweynaha soo socda ee BCEIA oo aad dhiirrigeliso!